Global Voices teny Malagasy » Tsy Nitaredretra Tamin’ny Fanivànana Ny Aterineto I Rosia 2 Volana Alohan’ny Fifidianana Parlemantera · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Jolay 2016 6:16 GMT 1	 · Mpanoratra Christopher Moldes Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fanoherana, Fifidianana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Akon'ny RuNet
Maro ny olona manerana izao tontolo izao no mifantoka amin'ny fifaninanana eo amin'ireo Amerikana Hillary Clinton sy Donald Trump, fa ho avy ihany koa izao ny fifidianana ao Rosia izay hisafidianan'ireo mpifidy ny ho mpikambana ao amin'ny Antenimiera amin'ity Septambra ity. Araka ny tatitra , nandany maherin'ny 20 tapitrisa robla (eo amin'ny 313.000$) teo ny Foiben'ny Vaomieran'ny Fifidianana tamin'ny fanentanana ny mpifidy , nandoavana ny fitaovana toy ny petaka dokambarotra amin'ny fiara sy ireo dokambarotra amin'ny onjam-peo, fahitalavitra, ary ny Aterineto, tamin'ny fanantenana ny hampiroboroboana ny taham-pahavitrihana.
Na dia lasa tsy misy fifaninanana loatra aza ny fifidianana Rosiana tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, dia misy ireo manam-pahaizana sasany ankehitriny no manombantombana fa mihevitra  ny tena fikarakarana ny fampielezan-kevitra ny mpanohitra Antoko Komonista izay nahazo laza naharitra teo amin'ireo zokiolona mpifidy sady manintona ireo tanora hatrany ihany koa, hoy ireo sasany, amin'ity fifaninanana iray ity na dia eo aza ny mety hisian'ny hosoka amin'ny fifidianana.
Te-hampandeha milamina ny fifidianana ambonin'ny rehetra anefa i Kremlin mandritra izany fotoana izany. Tany am-piandohan'ity taona ity, nanome teny ny Sampam-piarovana Federaly (mpandimby ny KGB) ny Filoha Putin, nampitandrina ny sampan-draharaha izy fa efa miomana hiditra amin'ny fifidianana parlemantera ao Rosia ” ireo fahavalo am-bavahady  ” ka ireo hery Tandrefana no noresahany tamin'ny fomba hentitra tamin'izany. Ary nandidy ny sampam-piarovana federaly amin'ny fandrarana ireo izay miezaka ny hampiasa ifotony ireo teny filamatra sy ny fomba hafa “mampisara-kevitra” ny fiaraha-monina Rosiana izy.
Miditra an-tsehatra ny Roskomnadzor, ilay sampan-draharaha federaly nokaramaina tamin'ny fifehezana ny fampitam-baovao Rosiana, anisan'izany ny Aterineto. Ny fahefana lehibe amin'ny fifehezana ny Tranonkala  [mg] no tena hamantarana an'i Roskomnadzor, mihazona ireo lisitra maintin'ireo loharanom-baovao voarara an-tserasera izy amin'izany. Ankehitriny, nanambara ny sampan-draharaha fa efa nanakana tranonkala efatra izay namoaka antso ho amin'ny fanaovana ankivy amin'ny fifidianana ao Rosia amin'ity Septambra ity izy, sy ireo tetika hanaovana hetsi-panoherana mba hanakorontanana ny fifidianana ihany koa.
Araka ny fanambarana an-gazety , nilaza ny Roskomnadzor fa valin'ny baiko nomen'ny Biraon'ny Lehiben'ny Fampanoavana izany:
Rehefa tonga ny fanehoan-kevitra, nanazava  ilay fanapahan-kevitry ny sampan-draharaha ny mpitondratenin'ny Roskomnadzor, Vadim Ampelonsky, fa nanakana ireo tranonkala noho ny “antso hihetsehana,” fa tsy voatery noho ny fanentanana amin'ny fanaovana ankivy amin'ny fifidianana fotsiny. Nanamarika, na izany aza, ny Roskomnadzor mba hisarihana ny saina amin'ireo fomba fikatrohana ‘tsy ara-dalàna” ataon'ireo tranonkala hanao ankivy ny fifidianana, nanonona izany intelo izy tao amin'ny famoahana fanambarana an-gazety voalohany. Nilaza tamin'ny tranonkalam-baovao TJournal i Ampelonsky fa “ekstremisma hiringiriny” ny “fampielezan-kevitra toy izany”.
Nahalala ny fampitam-baovao Rosiana tatỳ aoriana fa an'ny vondrona mpanohitra Mikhail Khodorkovsky Open Rosia ny iray amin'ireo tranonkala voasakana efatra izay tsy ela dia novahana rehefa nanaisotra ny votoaty notondroin'ny mpampihatra lalàna. Tsy fantatra ny tranonkala telo hafa ao amin'ny lisitr'i Roskomnadzor. Tsy nisy intsony ny fanakanana ny iray rehefa narahana ny baiko fandaminan'i Roskomnadzor. Iray amin'ireo tranonkala roa hafa izay pejy  toa somary mampatahotra ao amin'ny blogspot.ru sisa no mbola hita an-tserasera. Manasongadina sari-na clown mpamono olona amin'ny endrika karandoha iray sy ny teny hoe “ny Fanolorana ny Fifidianana-2016. ‘”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/07/12/85153/
 ireo fahavalo am-bavahady: https://tvrain.ru/news/putin-404405/
 fahefana lehibe amin'ny fifehezana ny Tranonkala: https://mg.globalvoices.org/2016/07/04/84298/
 Araka ny fanambarana an-gazety: http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news39992.htm
 Open Rosia : https://globalvoices.org/2015/05/01/russias-democratic-opposition-is-trying-to-unite-and-the-road-ahead-is-bumpy/